xargaha, xargaha nadiifka ah ee nickel alloy - Winrock
Xirfadlaha xajinta ee Nickel Alloy
Xirfad aan ku xirneyn
Qalabka Suxuumada Qalabka ah
Xirfadlaha dheeraadka ah
Qaybaha Titanium Alloy
bandhig alaabta ceeriin ah
Winrock waxay qaadataa sayniska iyo tiknoolajiyada cusub, si loo abuuro caalami ah, iyo alaabooyin la aqoonsaday gudaha gudaha iyo dibaddaba.
Winrock waxay u adeegtaa suuqyo kala duwan iyo suuqyo. Haddii aad raadineysid qalabka caadiga ah ama raadinaya xal gaar ah, waxaan haysanaa waxaad u baahan tahay!
Winrock waxay bixisaa waraaqo xog farsameed oo loogu talagalay dhammaan walxaha, Waxaad ku arki kartaa xogta interneetka, ama waxaad soo dejisan kartaa foomka ...
Ku saabsan Winrock
Winrock waa shirkad tayo sare leh oo ku xiran dhejis gaar ah, waxay xafiis ka sameysaa magaalada shanghai, saldhigga wax soo saarka waxaa laga helaa magaalada Dongtai, gobolka Jiangsu. Wax soosaarka ayaa si weyn u codsanaya saliidda iyo gaaska, batroolka, korontada, weelka cadaadiska, Walxaha ... Waxaan xakameyn karnaa xuduudaha heerka caalamiga ah ama shuruudaha khaaska ah ...
Qalabka 718 625 600 601 heeso kulul dhejis ah iyo xirxiraha M6 M120
Hawlaha muhiimka ah waxaa ka mid ah: Tayada Tayada Shacabka Waqti-gelinta Adeegga bixinta Bixinta Khidmadda khaaska ah ee ku habboon shuruudaha macaamiisha: Si aad u sawirtid shuruudaha macaamiisha Iyada oo tijaabooyin dheeraad ah lagu sameeyo Qalabka aan caadi ahayn Qalabka aan caadiga ahayn Dhexdhexaadiyaha qalabka gaarka ah ee loo sameeyay heerarka caalamiga ah. Foomamka mawduuca: Dhamaan xayeysiinta ayaa la bixin karaa ...
iibiyaha shiinada 304 duuduubka maqaar aan duuduubnayn garbaha garabka bidix 10mm garabka diga 12mm
Qalabka 1): M2, M3, M4, M4, -40-6 / 32-2 300) Qashinka Diyaarada + Zinc Plated + Qalabka aan Dhuxusha + SUS3 Ka Qaybqaadashada. 4) Marka la eego sawirada ama shaybaarka. 1) OEM waa la soo dhaweynayaa. Xirmooyin iyo dhejisyo badan: 2: Tayo sarreeya, Qiimaha tartan, adeeg fiican iyo bixinta degdegga ah. 3: Heerarka kala duwan ee doorashadaada. 4: Dhammaan alaabooyinka ayaa maray heerarka caalamiga ah. 800: Suuq weyn: XNUMX tones oo ah qiyaaso kasta. About our ...
M3, M6 titanium caarada madaxa madaxa madaxiisa kore ee daboolka faanjiga flangeerka loogu talagalay qalliinka lafaha
Sharraxaadda Sheyga Waa maxay faa'iidooyinka HPF? 1. Waxaan nahay shirkad toos ah 2. Xaqiijinta Tayada: ISO9001-2008 Shahaadada la geliyay TUV SGS, CE shahaadada, tiknoolajiyadda habka geedi socodka / nidaamka 3. Awooda Awooda Xirfadlaha 4. Qiimaha macquulka ah iyo tartanka 5. Amarrada yaryar iyo amarada ballaaran ayaa la soo dhaweynayaa 6. In ka badan khibradaha sanadka 20 ee ...
Haddii aad hayso su'aalo, Fadlan na Ogayso. Waxaanu kuugu jawaabi doonaa saacadaha 12
cnc qalab qallalan oo qummaatiga ah ee looxa ku shaqeeya guntinta
qalabka cnc ee saxda ah ee wax lagu dhejiyo qallajiye aan sali lahayn
M5 x 40mm SOMXmm 12.9 alwaax alwaax alwaax caarad madaxa kore
Dhuxulo bira ah oo ka samaysan shirkad sare
tuubo dhejis ah oo ku dhegsan madaxa xijaabka / M5 tukaanka
E-mail: [Email ilaaliyo]
Xafiiska Add: Qolka 501 Dhismaha 36 No.312 Shanghai Shiinaha
Taageerada Farsamada Hangheng.cc | Sitemap XML